रोचक « Etajakhabar
३३ वर्षकी निक्कीको यो अनौठो कामले उनी विश्व चर्चित बनिन्, ६० लाखको जागिर छाडेर सुरु गरिन् घण्टामा नै ३० हजार कमाउने काम
चितवन : चितवनमा नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको छ। नेपाल पक्षीविद् सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वासु बिडारीका अनुसार खैरहनी नगरपालिका–११ पिडहनी क्षेत्रमा धानबारीमा नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको हो। छ दिनअघि वर्ड
के तपाई ५ फिट ९ इन्च अग्लो हुनुहुन्छ ? तपाइँमा हुन सक्छ दर्जनौँ स्वास्थ्य समस्या
न्युयोर्क : के तपाइँ धेरै अग्लो हुनुहुन्छ ? एउटा पछिल्लो अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो भने अग्ला मानिसलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी दर्जनौँ समस्याको जोखिम हुन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले अमेरिकाका २ लाख ५० हजार
बिहेको केही घण्टामै बेहुलाले यस्तो हर्कत गरेपछी बेहुलीले बोलाईन प्रहरी
काठमाडौं । बिहे भएको केही घण्टा नबित्दै बेहुलाले बेहुलीमाथि आ क्रमण गरेका छन् । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई विवाह समारोहकै क्रममा पक्राउ गरेको थियो । बेहुलाले यस्तो रुप लिएपछि बेहुलीको तर्फबाट
जब आफ्नो मालिक जुम लेक्चरमा हुन्थे तब यो बिरालो पनि नजिकै गएर सबै सुन्थ्यो……
न्युयोर्क: अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयले आफ्नो मालिकसँग जुम कक्षाको हरेक लेक्चरमा भाग लिएको बिरालोलाई बधाई दिएको छ । महामारीका कारण फ्रान्सेस्का बोर्डियरले कलेजको अधिकांश समय घरबाटै जुम कक्षा लिएकी थिइन् ।
आफ्ना हुनेवाला पतिलाई फिल्मी शैलीमा समातेर जेल पठाएकी यी चर्चित महिला सब इन्स्पेक्टर पनि पक्राउ
एजेन्सी: हुनेवाला पति लाई ठगी मुद्दामा जेल पठाएर चर्चामा आएकी महिला सब इन्स्पेक्टर जुनमोनी ​राभालाई पक्राउ परेकी छन् । उनलाई ठगी गरको र ‘आपराधिक षड्यन्त्र’ गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको भारतियमिडियाले
प्रशान्त महासागर डुङ्गाबाट पार गर्ने यी हुन् ८३ वर्षीय बृद्ध, जसले यो बुढेसकालमा संसारलाई चकित पारेर देखाए
काठमाडौँ : प्रशान्त महासागरमा एक्लै डुङ्गा चलाउने व्यक्ति हुन ८३ वर्षीय केनिची होरी । यो खबर हो जापानको । जापानका ८३ वर्षीय केनिची होरीले शनिबार आफ्नो यट ९डुङ्गा० मा एक्लै
इन्धनको मूल्य आकाशिएका बेला यी कर्मचारीले दिए गधा गाडी प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य आकाशिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले जनता मर्कामा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानका एक व्यक्तिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न यस्तो आइडिया ल्याए कि मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । वास्तवमा,
यस्तो छ जाइफलको आचुक फाइदा , जन्नुहोस घरेलु बिधि
काठमाडौं – आज हामीले जाइफलको फाइदा सम्बन्धि प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छौं । जुन तपाईंको जीवन उपयोगी बन्न सक्छ १. मुखभित्रको छाला वा जिब्रोमा फोका/खटिरा आएमा जाइफललाई पिसेर एक गिलास पानीमा